CANAB DHOOBO GUGA: XEERARKA BILOWGA AH - CANAB
Sidee loo dalagaa canab guga
Canab waa beer dalag, oo inta badan ku koraya cimilada diiran. Laakiin qaar ka mid ah noocyada canabka ah ayaa si guul leh u qaadanaya xidid dhexdhexaad ah iyo xataa waqooyiga. Guusha cagaarka sii kordhaya waxay ku xiran tahay arrimo badan, mid ka mid ah waa gabbasho waqti go'an.
Canab dhoobo guga: faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Waa ku filan inaad gasho su'aasha "canab lagu gooyo guga bilawga bilowga" ee wax raadinta internetka, waxaadna heli doontaa fariimo badan oo ku saabsan sawirrada, qaabka fiidiyowga iyo wixii la mid ah. Laakiin kuma filna kaliya in la eego sawirrada, waxaa muhiim ah in la fahmo sifooyinka sida nidaamkan lagama maarmaanka u ah, sida canab.
Gooyo waxay kuu ogolaaneysaa inaad kordhiso dhalidda miraha, iyo sidoo kale si loo hagaajiyo dhadhanka berry iyo cabbirkooda. Thanks to nidaamka manjooyin si haboon loo fuliyey, waxaa suurtogal ah in si habboon loo sameeyo baadiyaha, taas oo si weyn u fududeeysa daryeelka dhirta. Sidoo kale gooyaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad dardar-gasho canabki.
Hase yeeshee qaabsocodkani wuxuu leeyahay cilladahiisa. First of dhan, waa diiqada geedka. Sida caadiga ah, guga geedka wuxuu bilaabaa inuu nuugo nafaqooyinka. Dhaawac kasta oo lagu jiro xilligaan ayaa ka hortagaya socodka dheecaan, taas oo keeni karta fuuqbax.
Canab dhoobo guga xilliga gu'ga ee bannaanka u bilaabi kartaa daciifin iyo luminta awoodda ka hortaga cudurada iyo cayayaanka.
Waa muhiim! Canab lagu gooyo guga waa la sameyn karaa oo kaliya inta lagu jiro baraaruga dhaqanka. Haddii aad lumiso arintan, ka dibna ugu fiican ee aad illoobi kartaa goosashada weyn, iyo ugu xun - baadiyaha sabiib ah oo keliya ayaa soo baxaya.
Goorta ay bilaabaan manjooyin guga
Iyadoo ku xiran xeerar gaar ah oo ku saabsan sida loo tolaado canab guga, bannaanka janabiya ma noqon doonto dhibaato. Waxa ugu muhiimsan - si loo ilaaliyo heerkulka. Tilmaamaha heerkulku waxay leeyihiin saameyn weyn oo ku saabsan Bisaylka kelyaha, wax-soo-saarka iyo tayada guud ee dalagga, waxay ku xiran tahay goorta aad gooysan kartaa canab guga. Waa xaalad ahaan suurtagal ah in loo qaybiyo manjooyin guga laba nooc: hore iyo goor dambe.
Manjooyin hore ayaa la sameeyaa bilawga maalmaha ugu horeeya diiran. Kadib markii heerkulka maalintii uu gaaro +5 ° C, canabku waa uu soo toosay. Tani waxay ka dhigan tahay inaad gacanta ku hayso qalab lagama maarmaan ah oo aad xor u tahay inaad bilowdo manjooyin.
Manjooyin dhammaystiran ayaa la sameeyaa ka dib markii ay burooyinkoodii hore bararaan, laakiin beeralayda waayo-aragnimada ah kuma talin karaan. Manjada dabacsan waxay keeni kartaa in geedka ay si fudud u yareyso nafaqooyinka lagama maarmaanka ah.
Sidaa daraadeed, su'aasha kuwa bilaabaya inay ku koraan canab, waa suurtogal in la gooyo May, jawaabtu waa maya. Waqtigaan, kaliya wuxuu bilaabmaa socodka dheecaanka firfircoon ee warshadda.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, goosashada canabku waa nidaam khatar ah. Khatarta ugu weyn waxay ahayd in taageerooyinka canabka ah ee canabku ay ahaayeen geedo sii kordhaya. Waqti ka dib, geedkii ayaa la qalajiyey, oo canabku waa in laga saaraa xagga sare. Waqtigaas, ma jirin wax caymis ah oo ku saabsan dadka canabka ah, sidoo kale mararka qaarkood canab ayaa lagu bixiyay kharashka nolosha aadanaha ee dareenka suugaaneed ee ereyga.
Tiknoolaji barista guga: sida loo helo si wanaagsan
Qaar badan oo bannaanka u janjeersaday waxay la yaaban yihiin sida loo gooyo canab guga cayayaanka aan la rabin. Marka caleemaha la isku xiiro waa in la xasuusto waxyaabaha ugu muhiimsan:
waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo dhammaan geedka canabka ah.
waxay u baahan yihiin inay ka baxaan qadar cayiman oo caleemo ah.
Xeerarkan waxaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo ku adkaata in ay ku guulaystaan ​​geed bilic ah, laakiin, xaqiiqda, wax waliba waa sahlan. Manjo ku habboon canabkiisa xilliga gu'ga waxay tilmaamaysaa ilaalinta laba nooc oo geedka canabka ah:
Geedka canabka ah. Wuxuu xakameynayaa socodka nafaqooyinka ee laamiyada yaryar, sidoo kale wuxuu hubiyaa koritaankooda caadiga ah iyo horumarintooda. Geedka canabka ah, oo ka masuul ah nafaqada dhirta, waxaa lagu magacaabaa "gacmo geel." Waxaa jira hab hubaal ah oo si habboon u xoqin canab si guga ah. Ugu horeyn waxaad u baahan tahay inaad doorato laan adag oo xoog leh, taasoo noqon doonta "gacmo". Haddii aysan hore u bixin karin canab dhan nafaqo leh, markaa "gacmo" waa in lagu badalaa geed canab ah oo kale.
Geedka canabka ah. Waa iyada oo ka masuul ah muuqaalka daaqsinka xilligan xaadirka ah.
Sidaa darteed, geedka canabka ah waa in laga tagaa canabki 2-4 jir ah, ka dibna lagu ogaado qaabka uu geedka canabka ah la sameyn doono. Ka dib markaa, waxaad bilaabi kartaa inaad soo saarto caleemaha aan loo baahnayn.
Waxaan bixinnaa talaabo sahlan oo ku saabsan sida loo ciribtiro caleemaha xad-dhaafka ah laga bilaabo guga guga. Bilowga ah waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan kuwan soo socda: 10 ka mid ah burooyinkeeda waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo geedka canabka ah. Jardiinaha nudaha ah ma jeclaan karo sida baadiyaha cayayaanka ah, laakiin fekerkiisa wuu isbedeli doonaa kadib caleemo cusub oo caleemaha u muuqda. Sidoo kale, waafaqsanaanta tiknoolajiyada ee manjooyin waxay noqonaysaa damaanad qaadka wanaagsan ee goosashada.
Ma taqaanaa? Ku dhowaad dhammaan qaybaha geedaha canabka ah waxay leeyihiin kahortaga iyo bogsiinta guryaha. Daawada, waxaa jira fikradda "ampelotherapy", taas oo ah, daaweynta canab. Habboon ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale caleemo, qoryo iyo ku dhowaad wax kasta oo laga qaadi karo geedka.
Qalab ah qalab loogu talagalay
Canab lagu gooyo guga "for dummies" wuxuu ku bilaabmaa xulashada qalabka lagama maarmaanka ah. Qalabka wax lagu kariyo ee ugu muhiimsan waa sawir, pruner iyo mindi, oo gooyay gooyn.
Mishiinnada manjooyin waa inay noqdaan kuwo horay loo qulqulay, maadaama ay tahay in ay noqdaan kuwo fiiqan ku filan si aanay u jebin gooynta inta lagu jiro manjooyin. Sidoo kale, lakabyada laysku qurxiyo ayaa u oggolaanaya inay gooyaan geedka canabka ah ee qumman oo kaliya hal dhaqdhaqaaq. Si aad u hubiso sharaxaada maqaarka, waxaad sameyn kartaa imtixaanka yar-yar ee soo socda: qaado warqad joogto ah oo ku hayso barta. Raadi fududaynta warqadda la jarayo. Haddii aad ku qasbanayd inaad sameyso dadaal, taasi waxay ka dhigan tahay in mawduhu aanay ku filnayn. Mindida beerta waxay kuu ogolaaneysaa inaad nadiifiso nabarrada ku sii jiraya kadib canabkoodii.
Waa muhiim! Wixii canab siiyay waxay u baahan tahay inay soo qaadato sawir leh ilko yaryar iyo boomo khafiif ah. Muuqaal noocan oo kale ah ma dabooli doono, iyo geeddi-socodka jarida waxay noqon doontaa mid sahlan. Iyada oo la kaashanayo sawir, waxaad si fudud u gooyn kartaa dhammaan laamaha waaweyn iyo diyaarinta guntooda beerto mustaqbalka.
Xeerarka loogu talagalay canjar geedka canjeerka guga
Dalag canab ah oo canab ah ayaa loo fuliyaa si waafaqsan dhowr xeer oo asaasi ah si looga fogaado khaladaadka caamka ah:
U hubso inaad ka saarto dhammaan waxyeellada, qaboobaha iyo bukaanka buka. Xitaa haddii nidaamka qashin-galka ay tahay inay ku sii jiraan baadiyaha.
Geedka canjiga guga wuxuu abuuray oo kaliya qalab nadiif ah oo fiiqan. Waa inaan jiri lahayn burrs iyo kala-goynta. Sida habboon, gooyuhu waa inuu noqdaa mid siman xataa xitaa.
Goynta waa in lagu fuliyaa xagal quman, iyada oo aan lahayn xayawaan.
Ha ka tagin caleemaha dheer, 10-12 indho ayaa ku filan.
Beddelka caleenta bedelka ah ee kudhow xuddunta.
Wixii fruiting dooro canabkiinna caafimaad leh leh dhexroor ah oo aan ka yarayn 6 mm.
Raacitaanka shuruucdan fudud waxay kuu ogolaaneysaa inaad koraan baadiyaha xooggan, kaas oo ka farxin doona goosashada canabka wanaagsan.
Ma taqaanaa? Geedka canabka ahna wuxuu u kori karaa boqol sannadood.
Sida loo sameeyo geedka canabka ah guga
Under xaaladaha dabiiciga ah, canab ah ee canab ah had iyo jeer waxay ku dadaalaysaa iftiinka iyo kor u sareeya, ku xoqin iyada antennae taageero kasta. Sidaa darteed, geedka gebi ahaanba kor u kaca. Markaad sii kordheyso canabkiina dhulkiina, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida si habboon u sameysmo macaan.
Sameynta habboon ee geedka canabka ah - Tani waa dammaanad ah goosashada wanaagsan. Si loo for geedka canabka ah si aad u hesho qaab sax ah, madaxa seedling waa in la dhigaa wax yar ka hooseeya heerka ciidda. Sannaddii labaad ee koritaanka sabiib ah ee guga, waa in dhirta la gooyaa, ka tago ugu yaraan kala badh. Ka tag on baadiyaha laba caleemo leh saddex ilaa shan dhegood. Guga, sanadka saddexaad ee koritaanka sabiib, afar caleemo waa in laga tagaa. Kuwa dibadda ah waa la jaraa ilaa 60 cm, iyo kuwa gudaha ah ilaa 40 cm oo dherer ah, ka dibna waxay ku xidhxidhaan silig ee qaab faneed. Laga soo bilaabo caleemaha noocan oo kale ah waxaa la helaa "gacmo-qabad" baadiyaha, taasoo dhawaan u bilaabi doonta geedi socodka cusub. Nidaamyadani waxay u baahan yihiin in ay jebiyaan, iyagoo ka tegaya saddexda sare. Sanadaha soo socda, inta lagu jiro sameynta baadiyaha canabka ah ee guga, mid kasta oo "gacmo" (booma) waa lagama maarmaan in laga tago xiriir miro ah (fallaadh iyo boodbood beddelaada).
Waa muhiim! Xeerka ugu muhiimsan ee abuuritaanka baadiyaha sabiib ah waa lagama maarmaan u ah caleemaha xad-dhaafka ah. Sidaas ayaad u xakameyn kartaa koritaanka saxda ah ee baadiyaha iyo xakamaynta mugga dalagga.
Qaab-dhismeedka caadiga ah
Nidaamka dhirta saxda ah waa inuu u dhigmaa da 'gaar ah oo geedka.
1 sano. Xilligan, canabku waa la gooyaa indhaha 2aad ee koritaanka laba caleemo. Dhammaan caleemaha kale waa la gooyaa karaa.
2 sano. Baadhitaanka ugu weyn waa la keydiyaa, kaas oo la gaabiyo 2-3 ilag. Tani waxay u adeegi doontaa saldhigga xoojiyaha. Sida kaydka, waxaad ka bixi kartaa hal biqil, taas oo la gooyaa laba xabo.
3 sano. Shtamb waxaa lagu jarayaa dhererka aad u baahan tahay. 2 caleemaha sare waxaa lagu keydiyaa - "gacmo-qabad", kuwaas oo la gooyey 2 buro oo ku xiran siligga. Ka hor inta aadan sameynin dusha sare, waxaad ka bixi kartaa 2 caleemood oo dheeraad ah. Mid ka mid ah biqil waxaa la gooyaa laba burooyinkoodii (badalid badalid), iyo kan labaadna 5-6 burooyinkeeda.
4 sano. Xilligan da'da, canabku waa laga jarayaa "gacmo-qabad" iyo caleemo xad-dhaaf ah, taas oo kuu ogolaanaysa inaad baadiyaha u sameysid sidii aad rabto.
5 sano. Dhamaan caleemaha xad-dhaaf ah ayaa la gooyaa. Kaliya kuwa aasaasiga ah ee sameeya xidhiidhka miro ayaa la keydiyaa.
6 sano. Marka la sameynaayo xidhiidhka khudradda ah, isbeddelka beddelka ayaa la gooyaa 2 buruun, oo fallaadhaha miro ayaa la jarayaa 7-8 indhood. Sida caadiga ah, da'da this, 2 xirmooyinka miro ayaa la sameeyaa on beeraha hal-tiirsan iyo 4 xirmooyinka safka double.
Isku-xidhka shinni-doonka ee canabku waxay ku xiran tahay da'da geedka. Da 'kastaa waxay u dhigantaa hab gaar ah.
1 sano Abuuritaanka geed duurjoog ah laga bilaabo sannadka ugu horreeya wuxuu bilaabmaa caddayn. Xaaladdan, dhammaan qeybaha, bukaanka iyo qalalan ee warshadda ayaa laga saaraa. Caleemaha yaryar waxaa la gooyaa 2-3 sentimitir oo kor u kaca indhaha hoose. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in laga saaro ilaa 90% dhammaan koritaanka dhalinyarada. Dhamaan arrimahan ayaa gacan ka geysta horumarinta saxda ah ee geedka sanadka soo socda.
2 sano. In duurka laba sano waxay u baahan tahay in la gooyo 60% dhammaan caleemaha yar yar. Sida caadiga ah, ka tag 2-3 gacmo adag, gaaban ilaa 2 peepholes.
3 sano. Da'daas, qaybaha miraha waxay ka sameeyaan dhirta. Goobta isbedelka (geedka canabka ah ee hoose) ayaa gaaban by dhowr koofi, iyo fallaar miro (qaybta sare) waxaa gaaban by 7-14 burooyinkeeda. Sidaa daraadeed, gacangaladda saxda ah ayaa la sameeyaa. Alwaax kasta waa inuu leeyahay 2 canab ah, dhammaan dadka kale waa la gooyaa.
Dheeraad ah, marka su'aasha soo baxdo, sida iyo goorta la jarayo canab, xusuuso in duurka miro dhasha (in ka badan 5 sano jir), qaybaha miro-gaaban oo keliya iyo 2-3 bedelid qashinka waa in la tagaa si loo cusbooneysiiyo taajkii.
Canab - dalagga beerta guud, kaas oo kuu ogolaanaya inaad bixiso noocyo kala duwan oo caafimaad leh iyo dhadhan fiican leh: casiir, khamri, sabiib, iyo wax la mid ah. Muuji daryeelka xannaanada, oo run ahaantii waxaad ku qanacsan tahay natiijooyinka shaqadooda.